Memories of Mi Aung (58) – HlaMin
ပျော် မော လေး
လူတွေကပြောတတ်ကြတယ်။ ” စုန်ရေ” ဘဲရှိတယ်။ “ဆန်ရေ” ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ ကျမ အမုန်းဆုံးစကားပါဘဲ။ ကျမတို့မိ ဘတွေက ကျမတို့ကို ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တာ၊ ဘာတွေမှ ပြန်ရဖို့ကို မမျှော်ကိုးခဲ့ဘူးဆိုတာ သိနေလို့ပါဘဲ။ သားသ္မီးဆိုတာကတော့ မိဘက ပေးတာယူ၊ ကျွေးတာစား ဆိုတာကတော့ သဘာဝတရားပါ။
အချိန်တန် အရွယ်ရောက်၊အတောင်အလက်စုံလို့ လူလားမြောက်လာကြရင်တော့လဲ သူတို့လဲ သူတို့လမ်းကိုသူ တို့လျှောက် ကြမှာပေါ့လေ။ ကျမတို့မိဘတွေလဲ ဒီလမ်းကိုဘဲလျှောက်ခဲ့ကြတာမို့၊ ပိုလို့မထူးဆန်းလောက်ပါဘူးနော်။
ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ တချို့လဲ အိမ်ထောင်ပြုကြလို့ ကိုယ့်မိသားစုအတွက်ရုန်းကန်ကြရင်းနဲ့ မိဘဆီကို ခြေဦးမလှည့်နိုင်တာလဲ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ သူ့မိသားစုမှာမှ မနဲကိုဘဲ၊မလောက်ငှလို့ ကြိုးစားရှာဖွေနေကြရရင်၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မိဘညီ အစ်ကို မောင်နှမဘက်ကို ငဲ့စောင်းလို့ကြည့်နိုင်ပါ့မလဲ။
ကျမကို နိုင်ငံခြားသားမိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ကပြောဘူးပါတယ်။ သူက ကျမကိုမိသားစုအကြောင်းမေးတဲ့အခါကြတော့၊ ကျမမှာ “အမေ၊ ညီမ ၂ ယောက်၊ မောင်၂ ယောက်နဲ့ ကျမအပါအဝင် မိသားစု ၆ ယောက်ရှိတယ်” လို့​ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူက “No, it’s not your real family. Your mother’s family. ” လို့ပြောခဲ့တာ။ ခု အသက်ကြီးလာမှ သူပြောတာမှန်ပါလားလို့ တွေးမိ တာပါ။
မိဘရင်ခွင်ကခွါပြီး အိမ်ထောင်ပြုသွားသူတွေကလည်း၊ မိဘညီအစ်ကိုမောင်နှမကို မချစ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်ကြပါ လိမ့် မယ်။ ဒါပေမဲ့ ၊ အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုသည်သာ သူတို့အတွက် အရေး အကြီးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အပြစ်ပြောလို့ဘယ်ရပါမလဲ။ အိမ်ထောင်ပြုသွားတဲ့သားသ္မီးက ပြည့်စုံကြွယ်ဝနေပါရက်နဲ့ မိဘ ကို ပြန်လှည့်မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ အပြစ်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့၊ ကျမခံစားမိတာပါ။ ဒါတောင်မှ သူတို့ပြည့်စုံဖို့၊ သူ့သားသ္မီး ပြည့်စုံဖို့ကို နေ့မအား၊ ညမနားသာ အလုပ်နဲ့နပမ်းလုံးနေရရင် မိဘဆီ ပြန်လှည့်နိုင်ဖို့ဝေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ သားသ္မီးတွေ အနေနဲ့ မိဘအတွက် နဲနဲလေးဖြစ်ဖြစ် အချိန်ပေးမိကြရင်တော့၊ ဒီ “ဆန်ရေ”ကိစ္စလေးဟာ နဲနဲများအဆင်ပြေသွားမလားလို့ပါ။ မိဘဆိုတာကတော့ သားသ္မီးကို ဘာမျှော်လင့်ချက်နဲ့မှ ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့၊ ကိုယ်လဲ ကိုယ့်ထက် အငယ်တွေကို မိဘနေရာကနေ စောင့်ရှောက်ခဲ့တာမို့ သိသင့်သလောက်သိပါတယ်။ နောက်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုသွား သူ ကလေး တွေအနေနဲ့ကလည်း သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်တဲ့၊ ယောကျ်ားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ တို့ကလည်း “ဘက်မျှ” ဦးပါမှ။
(တကယ်စဥ်းစားကြည့်ရင် အတော်ကို နက်နဲတာမို့၊ ကာယကံရှင်ကလွဲလို့၊ ဘယ်သူမှ မသိနားမလည်နိုင်တဲ့ အရေးကိစ္စတွေပါ။)
လူပျိုအပျို လူလွတ်တွေအဖို့ကတော့ မိဘနဲ့အတူနေ အတူစားပြီး၊နေထိုင်ရင်းနဲ့ မိဘကို အရေးမစိုက် မကျွေး မမွေးဘဲ၊ စောင်းငဲ့လို့မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ အပြစ်ပေါ့လေ။
မိဘက ပညာတွေသင်ပေးခဲ့လို့ အလုပ်အကိုင်တွေရ၊ အိမ်ထောင်လဲမပြုပါဘဲနဲ့ မိဘကိုကျွေးရမှန်းမသိတဲ့သားသ္မီးမျိုးတွေလဲ မြင်ဘူးခဲ့တာပါ။ သူ့အကြောင်းနဲ့သူပါဘဲလေ။ ဒီလိုမျိုးတွေ ကိုယ်မလုပ်မိဖို့နဲ့၊ အဆိုးအကောင်းကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့သာဘဲ အရေးကြီးပါတယ်။
ကျမကတော့ ကိုယ်က အစ်မအကြီးဆုံးဖြစ်တာမို့၊ ကိုယ်နိုင်တဲ့ “ဝန်” ကို တတ်နိုင်သရွေ့ ပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးလိုက်တာပါဘဲ။ “ငါ့ကို သူတို့ပြန်ကြည့်ပါ့မလား”ဆိုတဲ့အတွေးမျိုး တခါဘူးမျှ မတွေးဘူးတာပါ။ ကျမအနေနဲ့ကတော့ “စုန်” လဲ စုန်ခဲ့ဘူးပြီး၊ “အဆန်” ကိုလဲ မငြီးမငြူ “ဆန်”ခဲ့တာမို့ ။ တချို့ကတော့ မိဘဆီမှာ ရစရာရှိတဲ့ “အမွေ” ဆိုတာကိုမျှော်ကိုးရင်းနဲ့ ၊ မိဘရဲ့ဝန်ကို မကြိုက်လဲထမ်း၊ကြိုက်လဲထမ်း ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလဲ တွေ့ ခဲ့ဘူးပါရဲ့။ တွေးကြည့်ရင်တော့ အကြောင်းအကျိုးတွေချည်းပါဘဲ။
ဘယ်သူ့မှာမှ အပြစ်မရှိပါဘူး။ အားလုံးဟာ “ကံ” အတိုင်းဖြစ်လာတာလို့သာတွေးမိရင် – – – – –
“စုန်ရေ”ကို မျှောခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ မလွယ်လှပါဘူး။ကြိုးစားပြီး အားမာန်အပြည့်နဲ့ရုန်းခဲ့ရတာပါ။၊ “ဆန်ရေ”ကိုလဲ မမောတမ်း ပျော်ပျော်ပါးပါး ရုန်းခဲ့ရတာပါ ဘဲလေ – – – -။
ဆန်လာမဲ့”ဆန်ရေ”ဆိုတာကိုသာ၊ မမျှော်လင့်ဘဲနေနိုင်ကြရင်တော့ စိတ်ချမ်းသာကြရမှာပါဘဲ။
ဘဝမှာ အစုန်၊ အဆန် သွားခဲ့ရတာလဲ၊ တွေးကြည့်ရင်တော့ ဘဝခရီးမို့ အတက်အကျနဲ့ပျော်စရာပါဘဲ။